Saddex ruux oo isku qoys ahaa oo ku geeriyooday Madaafiic ku soo dhacay Wardhiigley – STAR FM SOMALIA
Inta la og yahay saddex ruux oo isku qoys ahaa ayaa ku geeriyootay madaafiic maanta duhurkii ku soo dhacay degmada Wardhiigley ee Gobolka Banaadir.
Madaafiicdan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray, ayaa jiho ahaan loo waday Madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo qaarkood la sheegay inay nawaaxigiisa ku dhaceen.
Madfac ku dhacay guri ku yaala degmada Wardhiigley ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux oo ahaa hooyo iyo labo caruur ay dhashay.
Sidoo kale waxaa madaafiicda ku dhaawacmay saddex ruux oo rayid ah, kuwaasoo la geeyay goobaha caafimaadka, sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Guddoomiye kuxigeenka dhinaca ammaanka ee Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye ayaa ku eedeeyay madaafiicda inay soo tuureen Al-Shabaab, isla markaana ay dad rayid ah ku laayeen.
“Meeshan aan joogno waa halkii Madfaca ku soo dhacay ee guriga dadka isku qoyska ahaa ku dhinteen, nimankaas nabad diidka ah Al-Shabaab waxay maalin walba u heelan yihiin dhiiga shacabka inay daadiyaan”ayuu yiri Maxamed Axmed Diiriye.
Waxaa uu ugu baaqay hey’adaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan kuwa madaafiicdan ka dambeeyay ee shacabka dhexdiisa ka soo dhex tuuray hoobiyaha.
Al-Shabaab ayaa baraha Internet ee taageera ku soo qoray inay madaafiic ku tuureen Madaxtooyada Villa Somalia.
Bishii hore ayay aheyd markii sidan oo kale Madaafiic dhanka Madaxtooyada lagu soo tuuray, iyadoo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir oo arrintan ka hadlay uu sheegay in madaafiicda laga soo tuuray Suuqa Bakaaraha, ayna koox ku labisneyd dareyska ciidamada oo gaari wadatay soo tuureen.